Home - Xinhua News Agency
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း၌ ထိုင်ဝမ်ဒေသ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုက “တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူဝါဒ”ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က BRIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်းပြောကြား
ဘိုင်ဒန်၏ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်ခရီးစဉ်က “အသိုက်အဝန်းငယ်” ဖွဲ့ခြင်းပုံစံသစ်ဖြစ်လာ
ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ကန့်သတ်ကာလ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ “ရုရှားသဘာဝဓါတ်ငွေ့ (Gazprom) ” အသုံးပြုသူ ထက်ဝက်က ရူဘယ်ငွေအကောင့် ဖွင့်လှစ်လာကြ
ဖင်လန်နှင့် ဆွီဒင် NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးကို သဘောတူမည်မဟုတ်ကြောင်း တူရကီသမ္မတ ထပ်လောင်းပြောကြား
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Mazar-I-Sharif မြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက စားအုန်းဆီတင်ပို့မှု တားမြစ်ချက် ရုပ်သိမ်းမည်
ရုရှားနှင့် အမေရိကန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ ယူကရိန်းအရေး ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေး
ကျင်စန်းကျော့-ဝမ်တိန်ဂိတ်အား မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှ စ၍ မြန်မာကုန်တင်ယာဉ်များ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဝင်ထွက်ခွင့်ရရှိလာသောကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး ပြန်လည်အားကောင်းလာ
China3 weeks ago
တရုတ်နိုင်ငံက ဂြိုဟ်တုအသစ်နှစ်စင်း လွှတ်တင်
ကျိုးချွမ်၊ ဧပြီ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုးချွမ် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ဂြိုဟ်တုနှစ်စင်းကို ဧပြီ ၂၉ ရက်က အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Siwei 01 နှင့် 02...
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဆိုပြုချက် ပြောကြား
China1 month ago
တရုတ်နိုင်ငံက Gaofen အမှတ် ၃ ဂြိုလ်တု ၀၃ ကို အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်
ပေကျင်း၊ မေ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) မိမိတို့၏ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီးသည် တစ်ချိန်က ကြီးမားသည့် သတ္တဝါကြီးများအုပ်စိုးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်နေရာမှ လာခဲ့သည် နှင့်မည်သည့်နေရာသို့သွားခဲ့သည်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဒိုင်နိုဆောရုပ်ကြွင်းတစ်ခုသည် အဆိုပါ...
ပြတိုက်များ၏ စွမ်းပကားကို ရှင်းလင်းစွာတင်ပြခြင်း
Media2 days ago
ရှန်ဟိုင်းအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသည့် ခက်ခက်ခဲခဲ အောင်နိုင်ခဲ့သော တိုးတက်မှုများ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီး ကိုလံဘိုမြို့ရှိ လမ်းများပေါ်၌ စစ်သားများက ကင်းလှည့်နေသည်ကို မေ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Photos1 week ago
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ ရင်ပြင်နီတွင် မေ ၉ ရက်က ကျင်းပသည့် မဟာမျိုးချစ်စစ်ပွဲအောင်ပွဲနေ့(V-day) ၇၇ နှစ် မြောက် အထိမ်းအမှတ် စစ်ရေးပြအခမ်းအနား မြင်ကွင်းများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ ၌ ကျင်းပသော အာရှချန်ပီယံရှစ် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ၂၀၂၂ တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ကြက်တောက်ရိုက်ချက်များ (ဆင်ဟွာ)
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရွှေလီမြို့ ဝမ်တိန်နယ်စပ်ဂိတ် မံမန်လမ်းကြောင်း၌ ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ဖြတ်သန်းလာနိုင်ကတည်းက နယ်စပ်ဂိတ်ကို ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကုန်သွယ်ရေးပမာဏ အဆက်မပြတ်ပြန်လည်တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးက မေ ၁၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၅၇ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမ၌ ယနေ့စတင်ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထား
North America3 mins ago
Europe33 mins ago
Africa & Middle East2 hours ago
Europe5 hours ago
China5 hours ago
North America6 years ago
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး အော်စကာဆုအား ဘရီ လာဆန် က ရရှိ
လော့စ်အန်ဂျလိစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် ညက Dolby ပြဇာတ်ရုံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၈၈ ကြိမ်မြောက် အော်စကာ ဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး အော်စကာဆုအား အမေရိကန် မင်းသမီး ဘရီ လာဆန် က “Room”...
Environment, Disasters & Accidents6 years ago
သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည့် အတွက် ၁၃ မြို့နယ်မှ ကျေးရွာ ၃၃ အား ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကူအညီပေးခဲ့
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြတ်လပ် သဖြင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ရေအကူ အညီ တောင်းခံ သောကြောင့် အကူအညီပေး ရမှုသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်အထိ တိုင်းဒေသကြီး လေးခု၊ ပြည်နယ် တစ်ခုနှင့် နေပြည်တော်...
အော်စကာ ဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုအား “Spotlight” ဇာတ်ကားမှ ရရှိ
လော့စ်အန်ဂျလိစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) Boston Globe သတင်းစာက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း အတွင်း ကလေးငယ်များ လိင် ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့် ခံနေရမှု အကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားသည့် “Spotlight” ဇာတ်ကားသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ညက Dolby...
Education & Health6 years ago
အများပြည်သူ ထိခိုက်နစ်နာ စေနိုင်သည်ဟု သံသယ ဖြစ်ဖွယ် စားသောက်ကုန် ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပေး ဆက်သွယ်နိုင်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) အများပြည်သူ ထိခိုက်နစ်နာ စေနိုင်သည်ဟု သံသယ ဖြစ်ဖွယ် စားသောက်ကုန် ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပေး ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ဆက်သွယ်လာသော သတင်းအချက် အလက်အပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း...
ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယို “The Revenant” ဇာတ်ကားဖြင့် အော်စကာဆုရရှိ
လော့စ်အန်ဂျလိစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) အော်စကာ ဆန်ကာတင် စာရင်းတွင် ခြောက်ကြိမ် ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၄၁ အရွယ် ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယိုသည် “The Revenant” ဇာတ်ကားဖြင့် ၎င်း၏ ပထမဆုံး အော်စကာဆုကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ညတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့်...
Page 6639 of 7277« First‹ Previous663566366637663866396640664166426643Next ›Last »